Golaha Shacabka oo meelmariyay miisaaniyada dowladda ee sanadka 2021-da. – Banaadir Times
By banaadir 29th December 2020 90 No comment
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa fadhi ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa waxaa ku ansixiyeen miisaaniyada dowladda ee sanadka 2021ka.
Kulanka oo xaadireen 145 xildhibaan ayay dhamaantood cod aqbaliyad ah ku ansixiyeen miisaaniyada oo kol hore loo soo gudbiyay Golaha Shacabka.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka maanta shir guddoominayay ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo maanta miisaaniyadu ansax tahay.
Wasiirka maaliyada Xukumadda Faderaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Bayle ayaa ka mahadceliyay ansixinta miisaaniyadda 2021” Waxa aan halkaan uga mahadcelinayaa Baarlamaanka Golaha Shacabka JFS oo maanta meel mariyay Miisaaniyadda Dowladda ee 2021-ka” ayuu yiri.
“Waxa aan sidoo kale u mahadcelinayaa masuuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda ee u soo dhabar adeegay shaqada iyo Isbadalka Maaliyadeed ee Dowladdu ku talaabsatay. Wasaaradda Maaliyadda waxaa ka go’an in ay xoojiso oo sii laba laabto dib-u-habeynta Maaliyadda” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Ansixinta miisaaniyada ayaa imaneysa xil uu dhamaaday muddo xileedka baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya, waxaana wali jira ajandayaal iyo sharciyo hor yaala Golaha oo u baahan in la meelmariyo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta u magacaabay xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiskiisa, Dr. Maxamed Ibraahim Nuur
Maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday 3 ruux oo lala xiriiriyay ka mid ahaanshaha Al Shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya oo shacabka Soomaliyeed udiray fariin laxiriirta Corono-Virus.
By banaadir 28th March 2020
Axmad Madoobe oo sheegay in aysan wax xiriir ah la laheyn Dowladda Dhexe
Dowladda UK oo ka hor-timid tallaabooyinkii uu qaaday Muuse Biixi